सचिन परियारको घर झ’गडाको बारेमा यस्तो भन्दै प्रेम परियार धेरैपछि मिडियामा, कहाँ हरा’एका थिए प्रेम ? (भिडियो हे’र्नुहोस्)
Homeसमाचारसचिन परियारको घर झ’गडाको बारेमा यस्तो भन्दै प्रेम परियार धेरैपछि मिडियामा, कहाँ हरा’एका थिए प्रेम ? (भिडियो हे’र्नुहोस्)
April 18, 2021 admin समाचार 5236
सानै उमेरमा निकै सु’मधुर गीतहरु गाएर चर्चामा रहेका गायक प्रेम परियार यति’बेला भने हराए जस्तै भएका छन् । धेरै भयो उनको गीत सुनिएको छैन, आ’खिर कहाँ के गर्दैछन् त, प्रेम परियार ? शिशिर भण्डारीले मिडियामा ल्याई’रहँदा प्रेमले आफु नयाँ गीतको तयारीमा रहेको बताए ।
साथै उनले आफु बिचमा हराउ’नुको कारण पनि खुलाए । धादिँगको बिपन्न परिवा’रबाट उठेर नेपाली साँगीतक क्षेत्रमा एक समय भाई’रल जस्तै बनेका प्रेमको आवाज बिचमा प’रिवर्तन भयो । उमेर सँगै परिवर्तन भएको आवाले उनलाई साथ दिएन र गीतहरु गाउने शिलशिलामा पनि कमि आयो । प्रेमको सानोको आ’वाज धेरैले रुचाउँथे ।
मिडियामा प्रस्तु’त भएका प्रेमले आफुलाई सानोमा सेल्फी खिच्न आउने भिडदेखि अहिले बाटोमा हिड्दा कसैले नचिन्ने अनु’भव समेत रहेको बताए । साथै प्रेमले पछिल्लो समय आएका साना भाई’रल गायकहरुको बारेमा पनि बोले । अशोक दर्जी, सचिन परियार लगायतका गायक भाईह’रुको बारेमा बोल्दै प्रेमले यसरी आउनु त रामे हो तर पछि’ल्लो समय सचनको परिवारमा भई’रहेको घट’नाले भने आफुलाई दुखी तुल्याएको बताए । के भन्छन् त, प्रेम ? इताजा खबरबाट
गर्भवती प्रेमिकालाई मन्दिरमा बिवाह गर्ने भन्दै बोलाएर , प्रेमी नआएपछि धरधरी रुँदै यी युवती (भिडियो हे’र्नुहोस)
‘कस्तो सुहाको फुली लगाको’को टिम इन्द्रेणीमा, प्रिज्मा प्रिन्सी छमछम नाचे (हे’र्नुहोस् भिडियो)
छोरीको श’व आफ्नो काँधमा बोकेर चि’हान खोज्दै हि’डेका बाबु
May 16, 2021 admin समाचार 5398
चन्डीगढमा वि’पन्न समुदायका एक व्यक्तिले आफ्नी ११ वर्षीय छोरीको शव आफ्नो काँधमा उठा’एर जालन्धर शहरस्थित क’ब्रगाह लगेका छन् । उनी बालिकाको कोभिड १९ का कारण मृ:त्यु भएको थियो । दिलिप नामका यी व्यक्तिका अनुसार अघि’ल्लो
पल शाहका समर्थकले यौ’नलाई निकै हल्का रुपमा लिए भन्दै आइन् रेस्लर अस्मिता (भिडियो हे’र्नुस)
April 15, 2022 admin समाचार 670
कर्मलाई निरन्त’रता दिएर अलिकति धैर्यता अपना’उन सक्यो भने महिलाले गर्न नसक्ने केही कुरा छैन भन्ने कुराको गतिलो उदहारण हुन नेपालकी महिला रेस’लर अस्मिता जुरेली । अस्मिता आफूलाई एकदमै स्पष्ट बोल्ने वक्ताको रूपमा चिनाउन चाहन्छिन् त्यसैलाई
आमाबुवाले युट्युवमा रुँदै दिएको अन्तरवार्ता देखेपछि ह’राएको छोरा दिल्लीबाट फर्किए , आमा बुवाको खुसीको सिमा रहेन (भिडियो सहित)
March 10, 2021 admin समाचार 5832
अञ्जान परियार भ’र्खरै १२ मा पढ्दै थिए । तर उनी एकाएक ह’राए । भर्खरको छोरा अ’चानक हराउँदा आमाबुवाको बिच’ल्ली भएको थियो । कतैवाट छोरा ममी भन्दै आउँ’छकी जस्तो लाग्थ्यो, रातभरी घरको ढोका पनि खुलै राख्थिन्
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228457)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227413)